Rank is Here.
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » Rank is Here.
1 Rank is Here. on 10th March 2010, 12:25 pm
2 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 12:31 pm
နောက်တစ်ခုကိုတော့ ဒီလိုလုပ်မလားလို့စဉ်းစားတယ်။ နှစ်ခုလုံးကိုတော့ ရိုးရိုးလေးပဲလုပ်ထားတယ်။ ဘယ်လိုသဘောရကြတုန်း။
3 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 12:34 pm
Nice Ranks Set Bro. But Still needs more attractive and more clearly.
VIP Rank ဆို ပြူးပြဲကြည့်လိုက်ရတယ်။ ဟီး
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လှတယ်ဗျ. ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ သိပ်ကြိုက်ဘူး။ BG မလှဘူး။
၂ ခုလုံးကတော့ လောလောဆယ် အပြားကြီးဖြစ်နေတယ်နော်။
4 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 12:40 pm
ဟင်....Rank ကိုအလုံးကြီးကြိုက်လို့လား။ [You must be registered and logged in to see this image.]
BG Color ကို Rank Color တွေပဲသုံးထားတာလေ။ အဲဒီ Font လေးကိုကြိုက်လို့သုံးလိုက်တာ။ အပြားကြီးမကြိုက်ရင် Bevel & Emboss လုပ်ပေးမယ်လေ။
5 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 12:44 pm
မြတ်ချွာဖယား...မင်၂ တို့ဘာတို့ နောက်မှာ ဖယောင်းတိုင်မီးကြီးပါလား မိုက်တယ်...
6 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 12:48 pm
αℓт.332 wrote: မြတ်ချွာဖယား...မင်၂ တို့ဘာတို့ နောက်မှာ ဖယောင်းတိုင်မီးကြီးပါလား မိုက်တယ်...
နင့်ဘကြီး ဖယောင်းတိုင်မီးပါလား။ အဲဒါ lighting effect ဟဲ့....ငါ့မှာအဲဒီအနေအထားရဖို့ မနည်းချိန်ထားရတာ။ ပြောရက်လိုက်တာ ။ ဖယောင်းတိုင်မီးတဲ့......
7 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 12:49 pm
8 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 12:56 pm
9 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 3:20 pm
ဘာ Rank တွေလဲဟင်
10 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 3:29 pm
11 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 4:29 pm
12 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 4:52 pm
13 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 4:54 pm
ကျနော်လဲ မမြင်ရဘူး ခင်ဗျ
14 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 6:02 pm
မြင်ရဘူးနော် ။ ဘာမှကို မြင်ရဘူး ။ Permission ပိတ်ထားတယ်နဲ့တူတယ် ။
ပြန်စစ်ကြည့်ပါအုံးဗျ ။ တွေ့ရဘူး ။
15 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 6:08 pm
16 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 7:05 pm
Power ကိုက်သွားပြီ။ IQ Vision သွားလိုက်လို့နောက်တာနော်။
17 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 7:22 pm
ဘယ်ဟာကြိုက်လဲ။ Vote တော့လေ။
18 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 7:29 pm
ဖတ်လို့ လွယ်မယ့် Font သုံးရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
19 Re: Rank is Here. on 10th March 2010, 8:46 pm
ပုံလေးတွေက ကောင်းပါတယ်... ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်... ကျနော်တို့ကို အဲလို Rank လေးတွေအပြင် ကိုယ်ပိုင် အရုပ်လေးတွေကို ဖန်တီးပေးပါလား... အခုက အွန်လိုင်းမှာတွေ့တဲ့ ကြုံရာကြိုက်ရာ အရုပ်တွေကို ယူသုံးနေရလို့...ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားလေးဖြစ်သွားအောင်...
(နာကတော့ ပူဆာမှာပဲ ရ၀ူး ရ၀ူး မရမချင်းပူဆာမှာ)
20 Re: Rank is Here. on 11th March 2010, 7:37 am
z3r0c00l wrote: [You must be registered and logged in to see this image.]
ဆိုက်ကိုရဲ့ 1st type က Founder ပုံစံလဲ မဆိုးဘူး
ကျန်တာတွေတော့ အဲဒီပုံစံ နှစ်ခုလောက် မျက်စိမကျဘူးဗျ
21 Re: Rank is Here. on 11th March 2010, 8:34 am
$ƴǩǾ wrote: Here is mine
ပထမပုံက ခရမ်းရောင်လိုင်းနဲ့နောက်က ခလုတ်ပုံကို ဒုတိယပုံမှာပေါင်းတည့်လိုက်ရင်ပိုကောင်းမလားလို့
နည်းနည်းအထွန့်တက်ကြည့်တာ ဘာမှမလုပ်ပဲအထွန့်တက်ကြည့်တာ Flag တက်လာအောင်လို့
22 Re: Rank is Here. on 11th March 2010, 8:40 am
mars wrote: ပုံလေးတွေက ကောင်းပါတယ်... ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်... ကျနော်တို့ကို အဲလို Rank လေးတွေအပြင် ကိုယ်ပိုင် အရုပ်လေးတွေကို ဖန်တီးပေးပါလား... အခုက အွန်လိုင်းမှာတွေ့တဲ့ ကြုံရာကြိုက်ရာ အရုပ်တွေကို ယူသုံးနေရလို့...ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားလေးဖြစ်သွားအောင်...
ကိုယ်ပိုင် အရုပ်လေး???? ကျွန်တော့် Avatar က အရုပ်လိုမျိုးလား???
အဲလိုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် Topic လုပ်ပေးထားတယ်လေ။
23 Re: Rank is Here. on 11th March 2010, 9:32 am
အကိုရေ ကောင်းတယ်ဗျို့ လှလည်းလှတယ် ။ တကယ်ပြောင်းမှလား ပြောင်းမယ်ဆို မြန်မြန်ပြောင်းပါဗျို့
သူများတွေကိုမြင်စေချင်ပြီ ။ အဲ့ပုံလေး ကြိုက်တာဗျို့
24 Re: Rank is Here. on 11th March 2010, 9:33 am
samurai wrote: အကိုရေ ကောင်းတယ်ဗျို့ လှလည်းလှတယ် ။ တကယ်ပြောင်းမှလား ပြောင်းမယ်ဆို မြန်မြန်ပြောင်းပါဗျို့
ဟင့် ဘယ်ကောင်က ကောင်းတာတုန်း။
25 Re: Rank is Here. on 11th March 2010, 9:51 am
26 Re: Rank is Here.